Cardi B uye Offset vadzoka pamwe chete - Nhau
Kuru Blog Macelebs Nhau Style
Kudzoka! Izvo Offset zvakasiya kuti Cardi B ayananise: Report
Mwedzi miviri mushure meCardi B naMigos rapper Offset split mukumuka kwe chitsotsi chekubiridzira , mushumo mutsva unoti vadzoka pamwe chete.
Paras Griffin / Getty Mifananidzo
Maererano ne TMZ , rapper Cardi ari kudzokera kumusha weAtlanta iye naiye murume akagovana nemwanasikana Kulture, mwedzi mitanhatu, kusvika kutanga kwaZvita, ndipo Cardi paakamusiya mushure mekuona kuti anga achimubudira.
Sekureva kwenzvimbo dzepedyo nevaviri ava, 'Offset akazviratidza kumukadzi wake,' anonyora TMZ. Akazviita sei? Akachinja nhamba yake yefoni uye achangoshandisa yake nyowani mutsara weCardi nemabhizinesi ekufona, TMZ inoshuma, mukuyedza 'kuratidza Cardi ari kutsunga nezvekuva akatendeka uye akatendeka.'
Chibvumirano chakatokura ndechekuti Offset yakatanga mutemo mutsva wekuti 'no groupies', TMZ inoshuma. Izvo zvichave zvirikutamba vhiki ino iri kuuya. Anotsanangura TMZ: 'Tinoudzwa Offset kuti haasi kubvumidza chero vateveri vechikadzi padyo naye panguva yekuonekwa kwake Super Bowl mu [Atlanta]. Anoda kuti Cardi azive kuti ari kufunga nezvekuroora kwavo. '
Kudzoka pana Zvita 5, TMZ akataura kuti hukama hwevaviri ava hwakaiswa mushure mekuburitsa mameseji kubva kunopera kwaJune - mavhiki mashoma vasati vatambira mwanasikana wavo - kwakabuda.
Mune iwo mameseji, Offset anonzi akabvunza mukadzi anonzi Summer Bunni kuti atange ivo vatatu naye, iye uye rapper Cuban Doll. (Sekureva kweTMZ, zvinyorwa zvacho zvakaburitswa nemumwe mukadzi mushure mekukonana neCuban Doll.)
Pakave nezviratidzo zvekuti Cardi anga akagadzirira kutora Offset kumashure munguva pfupi. Musi waNdira 22, akagovana skrini kubva kuFacetime yekufona nemurume wake, uyo aigona kuonekwa achigunun'una Kulture, akawedzera moyo nemusoro: ' Ndinoda kuenda kumba. 'Iyo posvo yakauya pazvitsitsinho zveIwe Svondo Shumo iyo yaiti Cardi uye Offset vaive' mukukurukurirana nguva dzese 'uye vanogona kunge vari' zvizere dzoka pamwe chete munguva pfupi iri kutevera. '
jesse williams uye taylor rooks
Imbwa yakadii iyo bounty muvhimi mukadzi
kristen mutariri & stella maxwell